Ihe na-nwere ike ime ka ike mbanye ọdịda
Ke Ruth nke ọganihu na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ ọhụrụ na elu teknụzụ na-mepụtara na-eme ka n'aka na ọrụ na-nọ na nkasi obi mpaghara nke mere na ha na-eche dajụọ mmụọ nke tech ngwaahịa na-eji. Ma, n'agbanyeghị na nke ihe nile a na-akpata ma ọ bụ ejighị ihe n'aka na unreliability-anọgide n'ebe ahụ ma na ọ mere ka Nsukka wuo ngwaahịa na-ọ bụghị nanị na a pụrụ ịdabere na kamakwa na akara na ihe ndị a chọrọ nke ọrụ. Ike mbanye bụkwa a tech ngwaahịa na a na-eji site ọrụ n'ụwa nile na PC, Laptọọpụ na ọbụna palmtops ugbu a na-agbakwunyere na nke a ọkara nke nchekwa. E nwere ọtụtụ ihe na-eduga na draịvụ ike mbipụta na odida na kasị nkịtị nke ha na-edepụtara dị ka ndị a.
Ọ nwekwara ike na-ahuta ka emepụta kpatara na ọ bụ otu n'ime ihe kasị akpata ihe obi ụtọ ahịa mgbe ọ na-abịa ndị a tech ụlọ ọrụ. A ohuru diski ike arụnyere na-ma ọ bụghị na-agụ site usoro ma ọ bụ ọ mkpọka mgbe ụbọchị ole na ole nke echichi. Femụwe mmejọ ezie na-adịghị nkịtị otú ha ime ịdị. Otu n'ime ndị isi na-akpata nke a nke bụ nnyefe nke ngwaike enweghị ule.
Ọ bụkwa otu n'ime ndị na-akpata na-ahụhụ site onye ọrụ ma ọ bụrụ na e nwere oké ike mmajijiji ma ọ bụ ọkụ eletrik surges. Isi ihe nke a nke dabeere na onye ọrụ ọgwụgwụ na gbasie bụghị ike ịnapụta zuru ike ọkọnọ ka PC. Ọ bụkwa otu n'ime ihe ndị mere ka n'ichepụta nke laptọọpụ. The gbasie na-ga-anọchi soonest kwere omume ime ka n'aka na nke bụ ofu n'ihi na onye ọrụ.
Rụrụ arụ faịlụ
Nke a bụkwa otu n'ime ihe ndị n'ihi na nke onye ọrụ bụ ọrụ. Unethical ụzọ nke mechisịrị ọnụ ala kọmputa ma ọ bụ na-ịkwụnye ya na ike isi iyi n'ihi na ogologo oge nwere ike ime ka a nke. Onye ọrụ kwesịrị wụnye a ụghalaahia antivirus iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na usoro a na-oge scanned-akpaghị aka. Ọ na-emekwa n'aka na ndị kasị mma a napụtara ka onye ọrụ na ndụ nke ike mbanye na-abawanye.
Ihe ịrịba ama na-atụ aro a ike mbanye ọdịda
Ịdị na-ele ihe ndị mere na e kwuru n'elu na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ihe ịrịba ama na-atụ aro na draịvụ ike bụ ihe na-ada ma ọ bụ ugboelu na-ọzọ kpọmkwem:
The ike mbanye na-adịghị ahụrụ site usoro mgbe niile.
The booting usoro na-ewe kwa ogologo iji wuchaa.
BIOS bụ enweghị ike ịchọpụta ike mbanye.
The ike mbanye adịghị ike na akpa ogho na a n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Dị mkpa faịlụ nke usoro na-adịghị agụ site ike mbanye.
The faịlụ na-rụrụ arụ n'ihi na ike anya na maka otu ihe ahụ ha na-agaghị na-ahụrụ.
Mberede ike mbanye odida bụkwa otu n'ime ndị ikpe na-eme ihe dị ka ihe ịrịba ama ma ọ bụ mgbaàmà na nke a.
Gịnị na-eme mgbe a ike mbanye ọdịda etịbe
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kwesịrị ekwesị nzọụkwụ na-e na nke a na-eme ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri na mma mmasị nke usoro nke mere na ntụrụndụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ nwere ike na-enwe. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime nzọụkwụ na ike iwere iji zere hassle na-eme n'ọdịnihu:
Naghachi gị furu efu faịlụ site na draịvụ ike ọdịda
Wondershare Data Recovery Bụ otu nke kasị mma omume nke na-ahụ na ndị kasị mma a napụtara ka ọrụ na nke a. Ojiji nke usoro ihe omume dị nnọọ mfe ma megide a obere ego ụlọ ọrụ na-bụ àjà a ndụ ikike na free upgrades dị ka ogologo oge na-eji software. Ọ nwere atụmatụ na ike ga-ejikwara na enyemaka nke dị nnọọ òké hovering na maka otu ihe ọ ga-eji site niile ọrụ na ọbụna a layman nwere ike ime ka jupụtara ojiji nke omume na-agbake data mfe.
Ịrụzi na draịvụ ike
Tupu ewere mkpebi nke dochie ike mbanye na-esonụ usoro bụ na-etinyere iji jide n'aka na nke ikpeazụ nzọụkwụ na-ewerewokwa ịrụzi ngwaike. Ụfọdụ nzọụkwụ na na-gụnyere ndị dị ka ndị:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na draịvụ ike a na-ahụrụ site BIOS usoro:
ii. The ike mbanye bụ na-meghere iji jide n'aka na ọ na-nwalere site-akpụ akpụ na nkụnye eji isi mee azụ na-apụta nke mere na noises na-nụrụ.
III. Nke a nzọụkwụ nwere ike na-ahuta ka uche na-adịghị site na ụfọdụ nke ọrụ ma refrigerating na draịvụ ike maka awa ole na ole na-dozie nsogbu ahụ na draịvụ ike na-aghọ arụmọrụ otu ugboro ọzọ.
E wezụga ndị a ndị ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na draịvụ ike arụnyere n'ime ọzọ usoro na ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ezi e mgbe ahụ, ọ pụtara na nke dabeere na usoro na motherboard bụ-enyocha na nke a na-eme ka n'aka na nke na-kpebiri kpamkpam. Ọ bụkwa uru banyere na ọ bụrụ na Filiks kwuru ebe a agwụ na anwụrụ ọkụ mgbe ahụ tupu dochie ike mbanye ọrụ enyemaka ga-chọ iji dozie nsogbu ahụ na zuru.
Dochie na diski ike
Ọ bụrụ na ndị na diski ike e ndenye juputara na e nweghị ụzọ pụta nke na-eduga ná nfiksi mgbe ahụ ndị na-esonụ usoro bụ a ga-agbaso na-eme ka n'aka na draịvụ ike na-dochie na okwu a bụ nke kpebiri na zuru ikwe ka onye ọrụ ịnagide aga-eme na-metụtara usoro:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka azụta ọhụrụ ike mbanye:
ii. Kọmputa n'akụkụ mkpuchi na-a ga-emeghe iji jide n'aka na esịtidem wiring n'anwụ:
III. The kposara nke ike mbanye ikpe na-a ga-emeghe:
too ogologo. The sockets nke ike mbanye a ga-jikọọ na ziri ezi ọdụ ụgbọ mmiri na draịvụ ike bụ na-Kewapụrụ na ikpe mezue usoro:
The n'elu usoro a nanị ga-agbaso ma ọ bụrụ na ike mbanye a na-eji maka n'ụlọ PC ma ọ bụ nanị n'ihi na ntụrụndụ na nzube. Ọ na-ike gwara iji nweta ọrụ enyemaka na nke a ma ọ bụrụ na ike mbanye nwere nnọọ mwute data nke a na-eji ndị ọzọ nzube dị ka iwu n'anya. Ọ pụrụ iduga nke na nsogbu maka ọrụ ma ọ bụrụ na Filiks na e kwuru n'elu ada ruru riri n'ihi na nke onye ọrụ bụ nanị ọrụ.
> Resource> Draịvụ> Gịnị na-eme mgbe ị na-ata ahụhụ a ike mbanye ọdịda